Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ललितपुरमा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना – Emountain TV
ललितपुरमा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं, २८ साउन । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मुलुकको समृद्धिका लागि नवप्रवद्र्धन भन्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । युवा पुस्तालाई विज्ञान तथा प्रविधिमा थप हौसला पु-याउनुका साथै नवप्रवर्द्धन के हो ? प्रवर्द्धन कसरी गर्ने ? र नवप्रवर्द्धनमार्फत देशव्यापी रुपमा समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भनी जान्नु कार्यक्रमको उद्देश्य हो । देशको समग्र विकासका लागि वैज्ञानिक र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अहिले नेपालको लागि जल्दोबल्दो आवश्यकता हो ।
सरकारले पनि समृद्धिका लागि प्रविधिको विकास र वैज्ञानिकको उत्पादनमा सक्दो प्राथमिकता दिने बताउंदै आएको छ । विज्ञान र प्रविधि कुनै पनि देशको समृद्धिसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हो ।
विश्वका समृद्धि देशहरुको पछाडि विज्ञान तथा प्रविधिको अहम भुमिका हुन्छ । तर नेपालमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यहि आर्थिक वर्षदेखि समृद्धिका लागि नवप्रवर्द्धन भन्ने कायक्रम अगााडि सारेको छ । विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी राष्ट्रिय ढाँचा तयार नभइसकेको अवस्थामा यस्तो कार्यक्रमले केहि हदसम्म सहयोग पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिलेको संसारमा आफ्नो देश अनुकुलको विज्ञान र प्रविधिको विकास नगरी आर्थिक विकास मात्र गर्छु भन्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र हो । यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन ।
आज विश्वका विकसित देशहरुको इतिहासलाई हेर्दा विगतमा उनीहरुले गरेको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा बृहत लगानीको परिणाम मान्न सकिन्छ । नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना पनि गरिएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको रुपमा पछिल्लो समय लगानी पनि गरेको छ । नेपाल सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा धेरै लगानी गरेको बताइरहँदा वैज्ञानिकहरु विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको लगानि पर्याप्त नभएको गुनासो गरिरहेका छन ।
विज्ञान र प्रविधि देश विकासको प्रमुख आधार मानिन्छन तर देशमा समृद्धि ल्याउन कतै न कतै चुकेको महशुस स्वयम वैज्ञानिकहरु नै गरिरहेका छन् । विज्ञान, प्रविधि र नविनतम पद्दतिको प्रयोग गर्देै विकसित देशहरुले विश्वमा थप प्रभावकारीता झल्काइरहेका छन् ।
तर नेपालमा भने विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नविनतम प्रयोग भएको पाइँदैन । सरकारले समृद्धिको सपना बोकेको छ । समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने हो भने सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा छिटो फड्को मार्ने नीति ल्याउन जरुरी छ ।